Bogga ugu weyn Maalgashiga Waqtiga-Gaaban ee ugu Fiican 2021-ka
2020 wuxuu la yimid dhabar jab weyn xaaladda dhaqaale ee ummadaha iyo waliba shaqsiyaadka. Iyadoo saddex bilood oo kaliya ay ka harsan tahay sannadka 2021 -ka, dad badan ayaa weli isku dayaya inay dib u soo celiyaan lacagihii lumay sannadkii hore. Nasiib darro, inta badan qorshayaasha maal -gashiga ee caanka ah waxay qaataan waqti dheer ka hor inta aan faa'iido wanaagsan la samayn.
Maalgashiga muddada-gaaban, oo sidoo kale loo yaqaanno dammaanad suuq-geyn ama maalgelin ku-meel-gaar ah, waa maalgelinno maaliyadeed oo si fudud loogu beddeli karo lacag caddaan ah, sida caadiga ah shan sano gudahood. Maalgashiyo badan oo gaagaaban ayaa la iibiyaa ama loo beddelaa lacag caddaan ah 3-12 bilood gudahood. CD-yada, xisaabaadka suuqa lacagta, xisaabaadka kaydka ee wax-soo-saarka badan, curaarta dawladda, iyo biilasha Khasnadda ayaa dhammaantood ah tusaalooyinka maalgelinta muddada-gaaban. Maalgashiyadani caadi ahaan waa tayo sare, hanti dareere ah ama baabuur maalgashi.
Kahor intaanan sii qeexin waxa maal -gashiga muddada -gaaban yahay, si dhakhso ah u fiiri jadwalka tusmada hoose.
Waa Maxay Maalgashiga Waqtiga Gaaban?
Maalgashiga Waqtiga-Gaaban Ma Faa’iido?
Noocyada kala duwan ee Maalgashiga Waqtiga Gaaban
Maalgashiga Waqtiga Gaaban ee Ugu Fiican
Maalgashiyada Gaagaaban Ma yihiin Hantida Hadda?
Sida Loo Doorto Maalgashiyada Gaaban ee Ku Habboon Baahiyahaaga
10 Maalgashi ee Gaaban ee Gaaban ee 2021
#1 Shaqada Curaarta Shirkadaha Waqtiga Gaarka ah
#2 Miisaaniyada Garqaadka
#3 Koontada Kaydka ee Wax-soosaarka Sare leh
#4 Lacagta Curaarta ah ee Dawlada Maraykanka
#5 Xisaabaadka Maaraynta Lacagta
#6 Dhiirrigelinta Koontada Bangiga
#7 Miisaaniyada Curaarta Dawlada Hoose
#8 Lacagta Isdhaafsiga ee Suuqa Lacagta
#9 Shahaadada Debaajiga (CD)
#10 Xisaabaadka Suuqa Lacagta
A maalgelin muddo gaaban ah waa dammaanad ama dammaanad sinnaan oo la filayo 3-12 bilood gudahood in la iibiyo ama loo beddelo lacag caddaan ah ama waxaa kaloo lagu magacaabaa maalgashi ku-meelgaar ah ama amniga suuq geynta ah. Taas macnaheedu waa in maamulku yahay kayd ama dammaanad kaas oo kasban doona faaiido degdeg ah oo qorshaynaya inuu iibiyo xilliga xisaabinta ee hadda. Taas macneheedu waxa weeye in maal-gashiga muddada-gaaban waa in si fudud loogu beddeli karaa lacag caddaan ah. Markaa haddii aan si sahlan loo iibin karin markaa looma tixgeliyo maalgelin muddo gaaban ah.
Faa'iidada maalgashiga muddada-gaaban waxay ku xiran tahay ujeeddada maalgelintaada. Haddii aad maalgelinayso dhis faylalkaaga, markaa maalgashiga muddada-gaaban malaha ma aha doorashada ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahan tahay lacagta waqti gaaban ama aad rabto il dakhli oo joogto ah- markaa maalgashiga muddada-gaaban waa hab loo maro waana mid faa'ido badan leh.
Akhri ALSO: Sida Loo Bilaabo Boutique Online ah 2021: Hagaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Noocyada kala duwan o Maalgelinta muddada gaaban waa;
Khasnadaha- Curaartaan ay dowladdu soo saartay waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan qoraalo, biilal, qoraalo dul sabeynaya, iyo Sicir-bararka Ilaalinta Sicir-bararka (TIPS).
Amaahda Peer-2- Miisaaniyada xad -dhaafka ah waxaa lagu maalgelin karaa mid ka mid ah meelahan amaahda ah ee isku xira amaah -bixiyeyaasha iyo amaahiyaha.
Shahaadooyinka Debaajiga (CD-yada)- Bangiyadu waxay bixiyaan deebaajiyadan, kuwaas oo sida caadiga ah bixiya dulsaar sare maxaa yeelay waxay xidhaan lacag caddaan ah wakhti go'an. Waxay ku jiraan caymis-FDIC ilaa ugu badnaan $ 250,000.
Curaarta Dowladda- Nooc ka mid ah maalgashiga ku salaysan deynta oo aad lacag ka amaahato dawladda si aad ugu beddesho dulsaar go'an. Dawladuhu waxay u adeegsadaan inay lacag ugu ururiyaan mashaariic cusub ama kaabayaasha dhaqaalaha, maalgashadayaashu waxay u isticmaalaan inay helaan soo -celin go'an oo la bixiyo waqtiyo joogto ah.
Kuwani waa dhawr nooc oo ah maalgelin muddo gaaban ah oo la ciyaarayay sanado taas oo dadku ka macaashayeen. Had iyo jeer xasuuso inaad la tashato Maal -galiye khibrad leh si aad u hubiso inaad taqaan dhammaan faahfaahinta ku saabsan qorshayaasha maalgashiga.
ARAG SIDOO KALE: Sida Tobnaad Loo Bixiyo Marka Deynta Lagu Leeyahay | Tilmaan Buuxo iyo Talooyin
Haddii aad raadinayso soo-celin sannad gudaheed ama ka yar, markaa maalgashiga muddada-gaaban ee ugu fiican ayaa noqon doona Xisaabaadka Suuqa Lacagta (MMA). Koontada suuqa lacagtu waa xisaab bangi ama midowga deynta oo bixiya dulsaar. Xisaabaadka suuqa lacagta (MMA), oo sidoo kale loo yaqaan xisaabaadka dhigashada suuqa lacagta, waxay leeyihiin astaamo aan laga helin kuwa kale noocyada xisaabaadka. Inta badan xisaabaadka suuqa lacagaha waxay bixiyaan dulsaar ka sarreeya xisaabaadka keydka buugaagta ee caadiga ah waxaana inta badan ku jira mudnaanta kaarka jeegga iyo kaarka bangiga.
MMAs waxay bixiyaan faa'iidooyin badan, sida dulsaarka dulsaarka, ilaalinta caymiska, iyo hubinta qorista iyo mudnaanta kaarka bangiga. Mid ka mid ah isbarbardhigyada ugu waaweyn ayaa ah suurtagalnimada in la kasbado dulsaar ka sarreeya koontooyinka kaydka. Sababtoo ah waa loo oggol yahay inay maal gashadaan shahaadooyinka dhigaalka (CD -yada), dammaanadaha dowladda, iyo waraaqaha ganacsiga, waxay bixin karaan dulsaar sare. MMAs sidoo kale waxay si fudud u siiyaan maaliyad iyo awood u lahaanshaha wareejinta lacagaha u dhexeeya xisaabaadyo badan oo isla hay'ad ah. Intaas waxaa sii dheer, xisaabaadka suuqa lacag badan waxaa ka mid ah mudnaanta qoritaanka jeegga iyo sidoo kale kaarka deynta, oo la mid ah koontada jeegga caadiga ah.
Si aan si waafi ah uga jawaabno degdegkan, waa inaan marka hore fahannaa waxa ay tahay hantida hadda jirta. Hantida hadda jirta waxaa lagu tilmaamaa hanti loo beddeli karo lacag caddaan ah muddo hal sano gudaheed ah. Haddaba HAA! Ujeeddooyinka xisaabaadka, maalgelinta muddada-gaaban waxaa loo tixgelin karaa hantida hadda jirta. Maalgashiga muddada-gaaban iyo dammaanadaha suuq-geynta ah waa maal-gelinno dammaanad oo soo saari doona lacag-celin caddaan ah sannad gudihii. Damaanadahan waxaa laga iibsan karaa oo lagu iibin karaa suuqyada saamiyada dadweynaha.
Run ahaantii, sida maalgalinta kaleba, waxaa jira qodobo gaar ah oo u baahan in la tixgeliyo ka hor intaan la go'aansan qorshaha maalgashiga. Runtii waxay kuxirantahay waxaad raadineyso inaad ka baxdo qorshaha iyo muddada aad rabto inaad maalgashato. Waxaa jira afar cabbir oo muhiim ah oo aad ka fiirsato ka hor intaadan go'aansan waxa maalgelinta muddada-gaaban ku habboon baahiyahaaga waana:
Muddada maalgelinta (1 sano ama ka badan)
Cunsurrada khatarta ah
waa AAD ku habboon in la ogaado in sida ay tahay maalgashi kasta, khatartu waa in mar walba la soo saaraa. Ha ku dhibin, hase yeeshee; waxaan ku siin doonaa maalgashiyada ugu gaaban ee ugu wanaagsan sannadka 2021 si loo hubiyo inaad gaarto go'aan xog-ogaal ah ka hor intaadan bilaabin safarkaaga maalgashiga. Aan bilowno!
Xiriirka shirkadaha waa dammaanad deyn oo ay ka iibiyeen maalgashadayaasha shirkaduhu si ay lacag ugu ururiyaan. Halkii laga qaadan lahaa amaahda bangiga dulsaarka badan leh, shirkaduhu waxay si fudud u siiyaan curaarta maalgashadayaasha dulsaar aad u hooseeya. Dulsaarka, sida saamiyada saamiyada, ayaa sida caadiga ah la siiyaa maalgashadayaasha saddexdii biloodba mar ama laba jeer sannadkii. Curaarta shirkadaha waxaa inta badan loo kala saaraa midkood darajada maalgashiga ama darajada aan maalgashiga ahayn (oo sidoo kale loo yaqaan curaarta wax-soo-saarka badan ama qashinka).
#2 Maalgelinta Garqaadka
Sanduuqa dhex -dhexaadintu waa sanduuq wadaag ah oo ka faa'iideysta kala duwanaanshaha qiimaha ee u dhexeeya hantida ay tahay in la isku qiimeeyo. Miisaaniyada gar-qaadiddu waa maalgelin aad u wanaagsan oo waqti-gaaban ah maxaa yeelay waxay yihiin halis yar marka la bixinayo soo-celin sare.
Akhri ALSO: 80 Sida ugu wanaagsan ee aad naftaada u maal gashan karto
#3 Koontada Kaydka ee Wax-soo-saarka Badan
Koontada kaydka oo wax-soo-saarkoodu sarreeyo ayaa ah maal-gashiga muddada-gaaban ee ugu ammaansan ee la heli karo. Lacagtaadu ma aha oo kaliya dareere aad u sareysa oo si sahlan loo heli karo, laakiin sidoo kale waa caymis FDIC, taas oo macnaheedu yahay inay badbaado tahay haddii bangigu ku guuldareysto. Marka la eego qaab-dhismeedka, wax-soo-saarka sare xisaabta kaydka kama duwana xisaabaadka keydka dhaqameed. Uma baahnid inaad ku dhex booddo wax kasta oo adag si aad u furato koontada kaydka ee wax-soo-saarka badan. Si fudud u raadi bangi bixiya xisaabaadka kaydka oo leh dulsaar 1% ama ka sareeya.
#4 Muddo Gaaban Sanduuqyada Boondhiga Dawladda Maraykanka
Curaarta dawladdu waxay la mid tahay curaarta shirkadaha taas oo ay soo saarto dawladda federaalka ee Maraykanka iyo hay'adaheeda. Lacagaha curaarta dawladda ayaa maalgashi ka iibsada hay'adaha dawladda dhexe sida Ururka Qaranka ee Mortgage-ka Dawladda, sida biilasha T-bond, T-bonds, T-note, iyo dammaanadaha rahmadda leh. Curaartaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid khatar yar leh. Sababtoo ah curaarta dawladdu waxay ka mid tahay hantida ugu badan ee lagu kala iibsado is -weydaarsiga, lacagaha dammaanadda dawladda ayaa aad u dareere ah. Waxay diyaar u yihiin iibsi iyo iibin maalin kasta oo suuqa saamiyadu furan yahay.
Koontada maamulka lacagta caddaanka ah, oo la mid ah koontada omnibus, waxay kuu oggolaaneysaa inaad maalgashato maalgelinno kala duwan oo waqti-gaaban ah. Waxaad si joogto ah u maalgashan kartaa, uga qori kartaa jeegaga koontada, lacag ku wareejin kartaa, oo aad u qaban kartaa hawlaha kale ee bangiyada caadiga ah. La-taliyayaasha Robo iyo dillaaliyeyaasha saamiyada ee internetka ayaa ah bixiyeyaasha guud ee xisaabaadka maamulka lacagta caddaanka ah. Natiijo ahaan, koontada maareynta lacagta caddaanka ah waxay ku siineysaa dabacsanaan aad u weyn.
#6 Xayaysiisyada Xisaabta Bangiga
Ma aha wax la maqlo in bangiyada ay lacag bixiyaan haddii macmiil mustaqbalka ah uu go'aansado inuu koonto la furo. Dabcan, waxaa jira xannibaadyo ay tahay in la buuxiyo, laakiin haddii aad leedahay dakhli dheeraad ah oo aad rabto inaad maal -gashato muddada gaaban oo aan khatar lahayn, tani waxay ku siin kartaa natiijooyin aad u wanaagsan.
#7 Lacagta Bond ee Dawlada Hoose
Curaarta dawladda hoose iyo curaarta dawladda Maraykanka ayaa la is barbar dhigi karaa in labadooduba ay dawladuhu soo saaraan si ay lacag u ururiyaan. Bonds -ka degmooyinka, ayaa waxaa bixiya dawladaha hoose iyo dawladaha hoose halkii laga siin lahaa dawladda federaalka ee Maraykanka. Waxaa loo isticmaalaa inay bixiyaan hawl maalmeedka iyo sidoo kale mashaariicda sida dhismaha dugsiga, dhismaha waddooyinka, iyo dhismaha bullaacadaha. Ikhtiyaarkan maalgalineed ee muddada-gaaban waa mid ammaan ah oo leh faa'iidooyin canshuureed.
#8 Lacagaha Is -dhaafsiga ee Suuqa Lacagta
Sanduuqa lacagta wadaagga ah ee suuqa lacagtu lama mid aha koontada suuqa lacagta. In kasta oo ay labaduba yihiin maalgelin adag oo waqti-gaaban ah, haddana waxay leeyihiin khataro kala duwan inkastoo magacyadooda la mid ah. Sanduuqa wadaagga suuqa lacagta wuxuu ku maalgeliyaa dammaanad-gaaban sida biilasha Khasnadda, dammaanadaha dawladda hoose iyo shirkadaha, iyo deynta bangiga. Sababtoo ah waa sanduuq la wada leeyahay, waa inaad u bixisaa saamiga kharashka shirkadda sanduuqa hantida la maamulay.
#9 Shahaadada dhigaalka (CD)
CD -yada ayaa kuu oggolaanaya inaad lacag ku maalgeliso muddo cayiman dulsaar go'an. CD -yadu waa kayd waqti, ma aha xisaabaad kayd, halkaas oo lacagtaadu soo saarto dulsaar isla markaaba la heli karo. Tan micnaheedu waa inaad dhammaysato muddada mudada laguu siiyay si aad dulsaarkaaga ugu hesho lacagtaada. Waxaa lagugu soo oogi doonaa ganaax haddii aad la baxdo lacagtaada ka hor intaan muddada dhererku dhammaan (sidoo kale loo yaqaan taariikhda qaan -gaadhka). Waxaa fiican inaad iska ilaaliso ciqaabta maxaa yeelay waxay marmar keeni kartaa dulsaar qiimihiisu yahay bil. Shuruudaha CD -ga waxay u dhexeeyaan hal, saddex, iyo lix bilood illaa sannad ama ka badan. Guud ahaan, muddada CD -gu sii dheeraado, ayaa lacag badan aad samayn doontaa. Waqtiga oo gaaban, lacag yar ayaad samayn doontaa.
Xisaabaadka suuqa lacagta waa nooc ka mid ah deebaajiga bangiga oo caadiyan bixiya dulsaar ka sarreeya xisaabaadka keydinta iyadoo waliba u baahan maalgelin ugu yar oo weyn. Xisaabaadka suuqa lacagtu waa kuwo aad u dareere ah, laakiin ka bixitaanku waxaa xaddidaya sharciga federaalka.
Maxaa sameeya maalgashi wanaagsan oo gaaban?
Marka ay timaaddo kala soocidda waxa uu ka kooban yahay maalgashiga wanaagsan ee gaaban, waxaa jira saddex waxyaalood oo la tixgelinayo: xasilloonida, korontada iyo kharashyada macaamilka oo hooseeya.
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee loo maalgelin karo lacagta muddada gaaban?
Waxaa jira siyaabo fara badan oo lacag loogu maalgelin karo kaalmooyinka muddada gaaban ee kor ku qoran. Liiska waxaa ku jira laakiin aan ku xaddidnayn: Debaajiga soo noqnoqda, Qalabka Deynta, Kaydka Lacagta ee Bangiga, Lacag-dhigashada Waqtiga Boostada.
Lacag-dhigashada muddada-gaaban ma yihiin maalgelin muddo-gaaban ah?
Debaajiga ereygu waa maalgelin waqti-go'an ah oo u baahan in lacag lagu shubo koontada hay'ad maaliyadeed. Lacag -dhigashada muddada ayaa sida caadiga ah leh bislaansho u dhexeeya hal bil ilaa dhowr sano, oo leh heerar kala duwan oo ah deebaajiga ugu yar ee loo baahan yahay.
Yaa laga rabaa in uu yeesho maalgashi muddo gaaban ah?
Maalgashiga muddada-gaaban ayaa aad ugu faa'iido badan kuwa leh daaqadda maalgashiga ee 1-3 sano. Haddii aad ku jirto u-socod dakhli xasilloon ama xitaa maalgeliyihii ugu horreeyay, markaa maal-gashiga muddada-gaaban ayaa ah kan ugu fiican.
Waa maxay maalgelinta muddada-gaaban aan ku samayn karo maaliyad yar?
Shakhsiyaadka leh ilaha maaliyadeed ee xaddidan waxay leeyihiin xulashooyin fara badan. Waxay ku maalgelin karaan maalgelinta maalgashi kasta oo aan lahayn shuruudaha dheelitirka ugu yar, sida xisaabaadka kaydka qaarkood, saamiyada jajabka ah ee sanduuqa tusmada, ama xitaa saamiyada jaban, curaarta, iyo CD -yada.
Si aad u bilowdo, hubi inaad haysato maalgaliye khibrad leh si aad si tartiib tartiib ah u barato xadhkaha oo aadan ugu degdegin go'aamada waaweyn.
Investopedia.com - Maalgashiga Muddada Gaaban
Investopedia.com - Xisaabaadka Suuqa Lacagta
bankrate.com - 8 maalgashi oo waqti-gaaban ugu wanaagsan bisha Sebtember 2021
50 -ka Ganacsi Ee Ugu Wanaagsan Maalgashiga 2021 | Liis buuxa
Miisaaniyadaha Vanguard ee ugu Fiican | Ma u qalantaa lacagtaada
Sida loo helo Xidhmada Ardayga ee xafiiska Microsoft
Bulshada hadda jirta, baahida loo qabo in la maalgashado ganacsi ayaa kor u kacaysa maalinba maalinta ka dambaysa…
Lahaanshaha koontada kaydka dhalidda sare waa hal hab oo la hubo oo lagu kasbado dakhli dadban oo dheeri ah. Waxay…
Soo Gudbinta Sheekada Gaaban ee Horror: Majalado Lacag badan ku bixiya Sheekooyinka
In kasta oo ay jiraan mudaaharaadyo badan oo liddi ku ah, waxaa jira meelo badan oo aad u wanaagsan oo lagu soo gudbiyo sheekooyin gaagaaban oo naxdin leh…
Ma ogtahay in lagu siin karo lacag si aad u barato code? Codayntu waa mid ka mid ah saamaynta…
Habka ugu wanaagsan ee lagu noqon karo maal-galiye wanaagsan waa in aad wax ka barato khubarada dhaqaalaha adiga oo dhageysanaya…